I-Taylor Made Franchising ithola Ukuhlanza kukaThomas | Franchiseek
»UTaylor Made Franchising utholela uThomas Cleaning
Isithombe: UDarren Taylor nomsunguli kaThomas Cleaning, uRichard Thomas
I-Taylor Made Taylor yaseDarren Taylor ithole i-Franseering yokuhlanza, okuletha inani eliphelele lama-Franchise angawakhe ayisihlanu.
UThomas Cleaning wasungulwa nguRichard Thomas ngonyaka we-1993 futhi wahlelwa ngoJulayi 2015. Ibhizinisi njengamanje linama-franchisees ayi-14. I-Franchise ihlinzeka ngokuhlanza okufuywayo nokuhweba, ukhaphethi wokuhlanza kanye ne-upholstery nokuphela kokuhlanza i-tenancy kanye ne-oveni.
Ngeke kube nezinguquko ezisheshayo ekusebenzeni kwebhizinisi.
UTaylor Made Franchising manje ungumnikazi wezinhlaka ezinhlanu, ibhizinisi lokuhlanza izimoto i-PVC Vendo, i-Stumpbusters, i-Wilkins Chimney Sweep, i-Traas Pest Control manje nguThomas Cleaning.
Ephawula ngokuthenga, i-MD yaseTaylor Made Franchising uDarren Taylor uthe,
'Siyajabula ukwamukela uThomas Cleaning emndenini weTaylor Made Franchising. I-Franchise ilunge kakhulu nabanye abaseqenjini futhi silangazelela ukuhlangana nawo wonke ama-franchisees kungekudala. Silangazelela ukuthola ama-franchise amaningi esizowengeza kwiphothifoliyo yethu futhi singagqugquzela noma yibaphi abaxhasi abangaba nentshisekelo yokuxhumana. '
Kulokhu kuthengisiwe, umnikazi wangaphambili uRichard Thomas uthe,
'Bekulula ngendlela emangalisayo futhi kumnandi ukuthengisa ibhizinisi kuTaylor Made Franchising. UDarren ungumuntu omuhle impela, uyangeneka kakhulu futhi inqubo yonke isheshe, kulula futhi akunazinhlungu. '
Eminye imininingwane ngeTaylor Made Franchising ingatholakala ku: https: //www.taylormadefranchising.co.uk/
Mayelana ne-Taylor Made Franchising
I-Taylor Made Franchising ingekaDarren Taylor. Inkampani ingumnikazi walezi zinhlangano ezilandelayo:
IStumpBusters UK Ltd
UWilkins Chimney Shanela
Ukulawulwa Kwezinambuzane Zezitimela
13 AmaKaldicott Barns, Semley, Shaftesbury, SP7 9AW
Ifoni: 01747 830298